Ukuvulwa kweakhawunti ye-Offshore eLuxembourg - kwiiNkampani zeSwitzerland eziNxweme
+974 3308 5298 Yenza idinga ngoku
DSineenkonzo zokuvula iiakhawunti ezingaselunxwemeni eLuxembourg kunye neeakhawunti zebhanki ezingaziwayo, ezinamakhadi okutsala imali. Ikwafumaneka kwimimandla yaseAsia, eMelika naseYurophu, ejolise kwiinkampani, abantu nakwiintlampani.
Sinenkonzo yokuvula iakhawunti ye-offshore eLuxembourgkananjalo iiakhawunti ezingaziwayo, elinamakhadi okutsala imali kwimimandla eyahlukeneyo e-Asia, eMelika naseYurophu. Ihlala kwiibhanki eziphambili ze-European Union kunye ne-United States. Sikwanazo iiakhawunti zebhanki engaphesheya kurhwebo lwe-elektroniki okanye i-e-commerce kunye nomzi-mveliso we-forex. Inkonzo yethu ilungelelaniswa neenkampani, abantu kunye neenkampani ezibalulekileyo kwihlabathi liphela.
Inye into enokuthi iwele entlokweni yabo bafuna ukukhupha imali eSpeyin kukuya nayo Luxembourg, kuba i-akhawunti yebhanki inokuvulwa ngokuyilawula naphi na emhlabeni.
Iziko lezemali kwinkonzo ye-EU
Luxembourg, Ngaphezulu kweebhanki ezingaphezulu kwe-150, ngokungathandabuzekiyo lelinye lawona maziko avunyiweyo ezemali kwihlabathi nakwinqanaba laseYurophu, likwabonelela ngeenkonzo zebhanki kubantu abangahlali beli. Iqale ukutsala abatyali mali abavela eJamani, eBelgium naseFrance ngenxa yamanqanaba erhafu asezantsi, ukunqongophala kokurhafisa irhafu kumdla nakwizabelo kunye nemithetho kwi imfihlo yebhanki.
Okwangoku, Luxembourg lelinye lamaziko aphambili ezemali anemali eyinkunzi ephezulu kunezo ziiCayman Islands, Singapore o Hong Kong. Nangona kunjalo, iLuxembourg ayiqwalaswanga i kwerhafu Ngokuchanekileyo ichazwe yi-OECD okanye ngumthetho waseSpain. Endaweni yoko, iziko lezezimali lale mihla kwinkonzo ye-European Union.
Kusemthethweni na ukuvula i-akhawunti yebhanki engaselunxwemeni eLuxembourg?
Sithetha ukuba ukuvula iakhawunti ye-unxweme eLuxembourg okanye nakweyiphi na indlela kude nolawulo olusezantsi lwasemthethweni kusemthethweni. Okungekho mthethweni kulele xa umzuzi wale akhawunti engazisi abasemagunyeni belizwe lakhe ngemvelaphi yakhe
ukuvulwa kobumnandi iakhawunti yebhanki engaphesheya. Kufuneka sikhumbule ukuba enye yeempawu eziphambili ze Imimandla engaselunxwemeni Yimfihlo kunye nokungaxelwa kolwazi lwerhafu lwabathengi bakho.
Izibonelelo zokuvula i-akhawunti yebhanki engaselunxwemeni eLuxembourg
ILuxembourg liziko leenkonzo zezemali elinobuchule kakhulu.
Icandelo lebhanki elunxwemeni kunye neenkonzo zemali zineminyaka emininzi yamava kwaye zilawulwa ngokufanelekileyo.
Ilizwe linodumo oluhle lokuba yimfihlo kunye nokuba ngasese.
Uncedo lwayo oluphambili kukuthandela irhafu kubatyali kunye neenkampani. Nangona ibekwe entliziyweni ye-European Union, abahlali abangahlali eLuxembourg abahlawulisi rhafu yengeniso, iinzuzo zekapitali okanye i-capital transfers.
Ngaphezulu kwe-1.200 yepenshini okanye iimali zotyalo mali ezisebenza kweli lizwe.
Iibhanki eziphambili ezingaselunxwemeni zisebenza kwiLuxembourg
i-oster Swiss, ukubonisana ngebhanki ezimeleyo nelizwe jikelele, ineenkonzo zokuvula iakhawunti ye-offshore eLuxembourgkananjalo iiakhawunti ezingaziwayo, ngamakhadi okuhlawulwa kwibhanki kumazwekazi awahlukeneyo, afana ne: Asia, Melika kunye neYurophu kwaye zihlala kwiibhanki eziphambili kwihlabathi jikelele, njenge-European Union kunye ne-United States. Iiakhawunti zaselwandle ejolise kwiinkampani, abantu kunye nakwimibutho enkulu yamashishini.
Banikezela iiakhawunti zebhanki engaphesheya kurhwebo lwe-elektroniki okanye i-e-commerce kunye nomzi-mveliso we-forex, ukusombulula i ukuvulwa kweeakhawunti zebhanki engaphesheya kula mazwekazi.
Inkonzo yefowuni yaseSpain
I-Foster Swiss yinkampani yaseSwitzerland yokubonisana namazwe aphesheya ekhethekileyo kubudlelwane beebhanki zamanye amazwe kunye nasekwakhiweni kwamaqumrhu kwihlabathi liphela enobukho kumazwe angaphezu kwama-50 kunye nokusebenzela abathengi kumazwekazi amahlanu.
I-Obra yeNtlalontle yeSwitzerland: Iqela lethu le-regatta
imposiso: Umxholo okhuselweyo !!